Ingxube Yesivundiso Ichaziwe
Izivundiso yizinto ezibonakalayo ezivela ezinhlobonhlobo zemvelo futhi ezivela endabeni yemvelo eyake iphila noma yokwenziwa kwamakhemikhali amakhemikhali nama-micro. Lawa asetshenziselwa ifomu elibizayo noma njengetshezi emhlabathini. Izakhi zingabuye zifakwe emagqabeni ezitshalo ukugqugquzela ukukhula nokwengeza izakhi ezitshalweni.
Izakhi ezintathu eziyinhloko ezisetshenziswa yisitshalo yi-nitrogen (N), i-Phosphorus (P) ne-Potassium (K). Uma ukhetha ukuthi yikuphi umanyolo ongayisebenzisa ukuthi yiwona macronutrients oyinhloko okuzobonakala emiphumeleni yokuhlaziywa kwesampula yakho yomhlabathi. Ama-fertilizer ahlanganiswa abe yizingxube ezihlukahlukene zalezi zi-macronutrients ezintathu futhi zikhonjwe ngezinombolo ezintathu ezibhalwe emasakeni omanyolo okhomba ukukhiqizwa komanyolo we-N P K kanye nesilinganiso senani labo enhlanganisweni. Isibonelo: 2:3:4 (27) noma i-1:0:1 (36) iyoba yinani le-NPK.
Ukumaketha kwe-NPK kumanyolo kuchaza amaphesenti ngayinye yalezi zondlo njengezinga elilingana komunye nomunye. Inombolo emva kwe-ratios kubakaki (isb.27) yiphesenti yenhlanganisela yenani elimele kuphela izakhi ezintathu ezinkulu eziyinhloko, okuyi-N, P no-K.
Ngakho-ke, esikhwameni esingu-100 kg se-2: 3: 4 (27):
I-27 (i-27) isho ukuthi u-27% wesikhwama noma ama-kilogram angu-27 umelela inani eliphelele le-N, P ne-K.
Isilinganiso sakhiwa izingxenye ezingu-9 ngokungeza u-2 + 3 + 4 futhi uma uhlukanisa 9 kuya kwezingu-27 bese ingxenye ngayinye ye-ratio imelela 3.
I-2 ephindwe ngo-3 yi-6% yama-nitrogen (N) noma ama-kilogram ayisithupha.
Ngakho-ke i-3 i-9% i-Phosphorus (P) noma i-9 kilogram.
Ngakho-ke i-4% i-Potassium (K) noma i-12 kilogram.
Amanye ama-kilogram angu-73 ama-kilogram ayi-100 kilogram yomanyolo akhiwa ngezinto ezenza kube lula ukusingatha umanyolo, izakhi zenkampani ezenza ukuthi i-N, P ne-K ifinyeleleke kakhulu ezinsikeni zezitshalo emhlabathini kanye nezinye izici zokulandelela ezifana ne-Copper, I-Zinc, i-Boron, i-Manganese ne-Magnesesi engasetshenziswa yisitshalo.